Uummanni Oromoo, goototaa fi qabsaa'ota ilmaan isaa, kanneen qabsoo walabummaa biyya isaanii Oromiyaa fi bilisummaa saba isaanii Oromoof taasisan irratti wareegaman bifa kamiin yaadachuu qaba? Kaayyoon gootota wareegamtoota Oromoo yoom guuta? Uummanni Oromoo galma qabsoo isaa ga'uuf maal gochuu qaba?… Marii Oromticha tokko waliin taasifame.
Sagantaa - Dilbata Waxabajjii 20, 2021
Abbaan Qabeenyaa Oromoo, Obbo Tashoomaa Nuqus Dureessaa, Konyaa Matakkal, Ona Dibaax, Ganda Qotee-bulaa Giippoo jedhamu keessa kan jiraatan, Waxabajjii 15, 2021 halkan toora sa'atii saddeetii, LMKII'n mana jireenyaa isaaniitii fuudhamuun ajjeefamanii bakkeetti gatamuun, reeffi isaanii guyyoota sadii booda (Waxabajjii 18, 2021) tikoota horiin bakkeetti argamuu.
Gidirfamni Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Itoophiyaa daangaa darbuun, Uummata Oromoo biyyoota ormaatti baqatanii jiran irratti raawwatu torbee darbe irraa qabuun, gama Biyya Arabaatti daran hammaachuun, baqattoonni Oromoo biyya Saa’udii Arabiyaa keessa jiraatan, kanneen kumaatamaan lakkaa’aman, Kamisa Waxabajjii 10, 2021 irraa qabuun hanga har’a, Waxabajjii 17, 2021’tti, mana hidhaa Magaalaa Jiddaa keessatti argamutti hidhamuun dararamaa jiraachuu.
Sagantaa - Dilbata Waxabajjii 13, 2021